के तपाईलाई यी १० लक्षण देखिएको छ ? क्यान्सर हुन सक्छ – Saurahaonline.com
के तपाईलाई यी १० लक्षण देखिएको छ ? क्यान्सर हुन सक्छ
मंसिर २८ । क्यान्सरयस्तो रोग हो जुन रोगले बेलैमा उपचर गरेन भने मानिसको ज्यानै लिन्छ । तपाइसंग पैसा भएर पनि केही लाग्दैन । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् ।हुनत यो बढाइचढाइ जस्तो पनि लाग्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् ।
दिसामा रगत, दुखाइः आन्द्राको क्यान्सर
मुख भित्र सन्चो नहुने घाउः धेरै प्रकारका क्यान्सर
निरन्तर खोकीः फोक्सोको क्यान्सर
शरीरमा भएका मुसाको रंगमा परिवर्तनः स्किन क्यान्सर
निल्न समस्याः खाना नलिको क्यान्सर
रहस्यमय रुपमा वजन घट्नुः धेरै प्रकारका क्यान्सर
पिसावमा रगत: प्रोष्टेट क्यान्सर
अनावश्यक टुडुल्को उठ्नु
रहस्यमय दुखाइ : धेरै प्रकारका क्यान्सर
दिसारपिसावमा रगत : गुदद्वार क्यान्सर
दिशा वा पिसावमा रगत देखिनु खतरनाक हो । खासगरी दिशामा रगत देखियो भने यसले तपाइँको ठूलो आन्द्राको अन्तिम भाग वा गुदद्वारमा क्यान्सर भएको हुन सक्ने संकेत दिन्छ । पिसावमा रगत देखियो भने चाँहि प्रोष्टेट क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ । एजेन्सीबाट सहयोगबाट